I-King Street Cottages - I-Rosebud - I-Airbnb
I-King Street Cottages - I-Rosebud
I-Rosebud inikeza ithuba eliyingqayizivele kubahambi abangashadile, noma imibhangqwana ukujabulela ukubaleka okuhle. Ingaphakathi leThe Rosebud linikeza isipiliyoni esithokomele, lapho ukunambitheka okuyingqayizivele kukaVanessa, umnikazi, kunikeze ukuthinta okukhethekile kokunakekela nokwazisa kuzo zonke izihambeli.
Itholakala endaweni yethu yangasese, enokufinyelela okuqondile endaweni eyihektare ebanzi yegceke okwabelwana ngalo nge-BBQ yamahhala yokusebenzisa kanye nomgodi womlilo ukuze uhlale ufudumele ngenkathi ujabulela ubusuku obuhle obumbozwe isibhakabhaka esicwathile nezinkanyezi ezicwazimulayo.
Ifakwe ngokugcwele ikhishi, igumbi lokuhlala elingu-1, igumbi lokulala eli-1 kanye negumbi lokugezela elilodwa.
I-cottage enefenisha ngokugcwele, lapho konke okudingayo ukuletha imizwa yakho emihle nomoya ophezulu. Ubumfihlo bakho nokunethezeka kuqinisekisiwe.
Kungakapheli nemizuzu nje uhamba ibanga lokuya ngasemanzini, nasezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela. Igugu lendawo yokubaleka okuhle empilweni ephithizelayo yedolobha.
Hamba phansi ngomgwaqo futhi ufinyelele endaweni emangalisayo yamanzi olwandle, vakashela iminyuziyamu eseduze namathilomu. Zonke lezi zindawo ziphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kweyisi-7 uhamba ngezinyawo.
Umgodi womlilo kanye ne-barbecue nendawo yokudlela yangaphandle. Izilwane ezifuywayo azivunyelwe, noma kunjalo, uma unesidingo esikhethekile, sicela usithinte kuqala futhi sizothola isisombululo esifanele.
Ngizotholakala uma nginemibuzo futhi ngisendleleni uma kukhona okudingayo . Ngitholakala ngombhalo ku-@250-616-3364, noma ungithumelele umlayezo nge-Airbnb.